उद्ध’घाटन हुन नपाउँदै ख’रानी भयो करोडौको सम्पति !
धनगढी : धनगढी उप-महानगरपालिकाको वडा नम्बर ४ च’टकपुरमा रहेको आलोक मल्टी कन्सर्न प्रा.लि. मा आ’गलागी भएको छ ।
आग,लागीको कारण खुल्न बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। आगलाागी बाट करोडौंको नो’क्सान भएको आ’कलन गरिएको छ ।भने आ’गलागी नियन्त्र,णमा प्रहरी, नेपाली सेना लगायतका शु’रक्षा निकाय हरु प्रयासरत छन् ।
अहिलेसम्म आ’गलागी नियन्त्र,णमा आउन सकेको छैन। उप-महानगरपालिकाको वडा नम्बर ४ चटकपुरमा रहेको आलोक फर्निचर उद्योग र शोरुममा आ’गलागी भएको हो। उद्घाटन समेत भै नसकेको फर्निचर उद्योगमा आ’गलागी भएको हो ।
आ’गलाागी बाट उक्त फर्निचर उद्योगमा लगभग ५ करोड बराबरको सामान रहेको आलोक मल्टी कन्सर्न प्रालिले जनाएको छ। विस्तृत विवरण आइरहेको जनाइएको छ। सीपी अस्पताल नजिक रहेको फर्निचर उद्योगमा आ’गो लागेको हो ।
त्यसको नजिक आयल निगमसमेत रहेको छ । आ’गलागी भएको स्थान आसपासमा ट्याङ्करसमेत राखिएका छन् ।धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिकाको दमकल, नेपाली सेना, प्र,हरी, स्थानीयवासी लगायतद्वारा आगो नियन्त्र,णको प्रयास भइरहेको छ ।
यसैगरी, सो आगो नियन्त्र,णका लागि नेपाल आयल निगमले भ’ण्डारन गरेर राखेको पानी पनि प्रयोग गरिएको छ ।आ’गलागी के कारणले भएको हो भन्ने अझै खुलेको छैन । आग,लागीबाट फर्निचर उद्योगमा भएका सामान ज’लेर न’ष्ट भएको छ । ठूलो क्ष,ति भएको बताइएको छ ।
२०७७ फाल्गुन २२, शनिबार २२:३७ गते 1 Minute 527 Views